Posted by တန်ခူး at 9:55 AM
သားသား ပုံလာကြည့်သွားတယ် စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ခလေး ဘာတွေလုပ်နေတာပါလိမ့်း) သေချာတောင်မမြင်ရဘူး သားသား ပ၇ိသတ်တွေထဲမှာ ကျနော်လည်းပါတယ်ဗျို့သူ့ အကြောင်းဖတ်ရင် မရယ်ပဲမရယ်နိုင်ဘူးး စကားပြောပုံလေးတွေက အသဲယားဖို့ ကောင်းလို့ခလေးတွေက ငယ်ရင်သင်ရခက်တယ်ထင်တယ် အိမ်က သူဌေးခလေးဆိုလည်း လေးလိုက်တာ အသက်တစ်နှစ်ကျော်ပြီး စကားလည်းမပြော အမူအယာပဲပြတာ သူ့ အမေဆိုစိတ်ပူပြီး ဆေးခန်းသွားသွားပြနေရတာ အ အ လေးလားဆိုပြီး အခုများတော့လည်လိုက်တာ တစ်အိမ်လုံးေ၇ာင်းစားမယ့်ပုံ ။ နောက်လည်းသားသားအကြောင်းရေးပါအုံးဗျို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။
ချစ်စဖွယ် သားသားလေးအကြောင်းတွေ ဖတ်သွားပါတယ်..။ ဟုတ်တယ်... ယောင်္ကျားလေး တွေက မိန်းကလေးတွေထက်စာရင် နဲနဲ နောက်ကျတတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် "သားသား အဲလို ဆိုးရင် ဖေဖေ ရုံးသွားမှာနော်” လို့ တော့ မခြောက်ပါနဲ့ တန်ခူးရယ်... သနားပါတယ်..။ ကလေးရဲ့ဆိုက်ကိုလေး တစ်မျိုးဖြစ်သွားပါအုံးမယ်...။
ဖြေးဖြေး မှန်မှန်နဲ့ တက်တဲ့ ကလေးက ပိုပြီး စေ့စပ် သေချာတယ် မတန်ခူးရဲ့ ။
ချိုသင်းလဲ သားသား ပရိသတ်ပဲ။
ကောင်းကင်ကြီး ဘာအရောင်ဆိုကတည်းက သဘောကျနေတာ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက မအေတူ အနုပညာဝါသနာပါလို့ ပန်းချီဆွဲတာ စိတ်ဝင်စားတာ အင်မတန်ကောင်းတယ်။
ကလေးဆိုတိုင်း ဖြီးလို့မရ၊ ဒီကလေးမျိုးက အကျိုးနဲ့ အကြောင်းနဲ့ ရှင်းပြမှ လက်ခံတတ်တာ။ အမတို့ ကံကောင်းတယ်။ အိမ့်ဆည်းလည်းလေးပေါ့ အမရယ်။
olwdkYav;awG&JY progress udkNunfYNyD; tm;&vdkuf pdwfylvdkuf pdwfwdkif;rusvdkufeYJaygY.. 'gav;awGeJYbJ tarmaNzae&w,f
သားလေးအကြောင်းတွေဆက်ရေးပါအုန်း။ ဒီတခါကျရင် သေချာမြင်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးပါတင်ပေးပါ။ ခုပုံက ခေါင်းငုံထားတော့ သေချာမမြင်ရလို့ ပါ
သားရဲ့ ပရိတ်သတ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့လည်း ပါတယ်။ အဲဒီလို ဘယ်အရွယ်မှာ တခြား ကလေးတွေ ဘာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတယ်လေ။ ဒါမှာ ကိုယ့်ကလေးတွေအတွက် ပြင်ဆင်သင့်တာ ပြင်ဆင် (ဥပမာ ပုံဆွဲတတ်တယ် အချိန်မှာ ပုံဆွဲ စာအုပ် ၀ယ်ပေး) လို့ ရမှာ။ ကျွန်တော်တို့ သမီးကလည်း တတ်တာ သူဟာနဲ့ သူပဲ။ တခြားကလေးနဲ့ ယှဉ်ရင် နောက်ကျသလို ရှိပေမယ့် နောက်တော့လည်း တတ်လာတယ်။ အစတုန်းက သူ့အမေဆို သိပ်စိတ်ပူတာ။ နောက်တော့လည်း သူဟာနဲ့သူ တတ်လာတာပဲ။ အခုတော့ သိပ်မပူတော့ပါဘူး။ အစ်မရေ များများသာ ရေးပေးပါ။ အားပေးတယ်။
သားအချစ်တဲ့ သြော်မိဘ မိဘ...အမရေ အဲဒီစာတွေမြင်ရင် အိမ်ပြန်ချင်တကယ်...
တန်ခူးရေ.... ဒီနေ့ ဖိုးရွှေလိပ်ကလေး ပို့စ်ကို ကိုယ်တိုင် တင်မပေးလိုက်နိုင်တာ နာတယ်ဗျာ။ အင်မတန် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးပါ။ ကြည့်ရတာ အမေလိုဘဲ စာရေးဆရာဖြစ်မယ့်သူနဲ့တူတယ်။ စာတွေကို အဆင့်ကျော်ရေးနေပြီဆိုတော့။ ပန်းချီလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ အဖေအမေနှစ်ယောက်လုံး မလုပ်တာပါ လုပ်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့။
သားပရိတ်သတ်တွေများနေပြီ...ကျနော်လည်း သားပရိတ်သတ်ပါပဲ..ကျနော်လည်း ကလေးတွေကို ချစ်တယ်... အခုတောင် အပြင်မှာ မတွေ့ရသေးတဲ့ တူတွေ တူမတွေကို ချစ်လိုက်ရတာ...
အမရေ... နေ့လည် ထမင်းစားချိန် အမ blog ကို ၀င်လည်တော့ သားသားခေါင်း ငုံ့နေတာလေးတွေ့ကတည်းက စာဆက်ဖတ်ချင်နေတာ.. အလုပ်တွေများလို့ ငြိမ်နေလိုက်ရတယ်.. ခေါင်းငုံ့ပြီး စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ငါးအရုပ်လုပ်နေတာ ချစ်ဖို့ကောင်းပါ့.. အမပို့စ်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ပိုပြီးတောင်ကြည်နူးမိတယ် မတန်ခူးရေ.. သားသားက အဖေနဲ့အမေကို ကပ်တာလည်း မပြောနဲ့တော့နော်... ဒီခေတ်ကလေးတွေလည်း အင်မတန်သနားဖို့ကောင်းတယ်.. ကျနော်က မျက်ရည်လည်းလွယ်တော့တချို့ကလေးတွေ အမေ အဖေ အပြင်သွားရင် လိုက်ချင်လို့ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေးပြီး ငိုတာတွေတွေ့ရင် ကိုယ်ကပါ ငိုချင်လာရော.. သားသားက လိမ္မာတယ်နော်.. ကျနော်ကတော့ ကလေးက သူ့သဘာဝအရ တဖြည်းဖြည်းသင်ယူပြီး တတ်တာကို ပိုပြီး သဘောကျတယ်.. ကလေးပဲ သူ့ဥာဏ်ထဲမှာ ရှိသလောက် သိသင့်သလောက်လေးကို မှတ်ထားက ပိုကောင်းတယ်.. တချို့ကလေးတွေက မိဘက သင်ပေးလို့ အရမ်းတတ်တာမျိုးက ကလေးက ကလေးလို ချစ်ဖို့မကောင်းပဲ လူကြီးလိုပြောဆိုနေရင် အသည်းယားလာတယ်.. အမရဲ့ ဖိုးရွှေလိပ်ကလေးက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပန်းတိုင်ဆီရောက်လာပါ့လိမ့်မယ် အမရေ.. အမဆီက ကလေးပြုစုနည်းတွေလည်း အတုယူသွားပါတယ်.. :)
“မေမေ ဒီဘက်ကို လှည့်ပါ ခင်ဗျ” လို့ပြောမှ လှည့်မယ်လို့အပေးအယူ လုပ်ရသည်။ ခုဆို ညကြီးသန်းခေါင် တရေးနိုးလို့အဖေအမေက တဘက်လှည့်အိပ်ရင်တောင် “ဖေဖေ ဒီဘက်လှည့်ပါ ခင်ဗျ” လို့ထထတောင်းဆိုတတ်လို့ကျွန်မတို့အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့တခွိခွိ ရယ်မိသည်။ ကွန်ပြူတာကစားနေလို့တခုခု အကူအညီလိုရင်လဲ “ဖေဖေ လာပါ ခင်ဗျ” လို့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ခေါ်ခိုင်းတော့ အတော်ကို ဟုတ်နေသည်။
အဲဒီနေရာလေးဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ချစ်လိုက်တာ..။မတန်ခူးသားလေးက အရမ်းယဉ်ကျေးတယ်ဗျာ...။
သင်ပြပေးတဲ့ မိဘတွေကို ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ....
သားရဲ့ ပန်းချီပုံလေးတွေလဲ တင်ပေးပါဦး...။
မတန်ခူး သားလေး အကြောင်းရေးထားတာ အင်မတန် ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ အစ်မသားလေးက အဖေနဲ့ အမေ ဘယ်သူ့ ပိုချစ်လဲဆိုရင် သူအမှန်အတိုင်းပဲ ဖြေတာ သူ့ရဲ့ ဖြောင့်တဲ့စိတ်ကလေးကြောင့် ဖြစ်မှာပါ။ သူကနှေးတာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ (ဟဲ ဟဲ အစ်မသားလေးဖက်က ရှေ့နေလိုက် ပေးတာ။)
ပေါင်ချိန်စက်ကို နာရီနဲ့ မှားတာ ဖက်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။
အမရေ.. ဖိုးရွှေလိပ်ကလေး ပုံက သေချာလည်း မြင်ရဘူး။ ချစ်ဖို့ကောင်းမဲ့ပုံလေး..
အမတို့မပြောနဲ့ ဒိုင်ခွက်ကို နာရီထင်တဲ့နေရာမှာ ပြုံးလိုက်ရသေးးး
နောက်လဲ လုပ်ပါဦးးး သူ့ပုံလေးနဲ့ စာလေးတွေ..
သားလေးအကြောင်း ဖတ်သွားပါတယ် အစ်မ။ သားလေးက ချစ်စရာလေး။
မတန်ခူးရေ- ကျမ ငယ်ငယ်ကလည်း အဲလိုပဲ.. ၂တန်းထိ ပေါင်းနုတ်မြှောက်စား သင်တာတောင်.. ဘာလို့ ပေါင်းရ နုတ်ရ တာလည်း.. လို့..တွေးကောင်းတုန်း..။
နောက်ပြီး..တွေ့ဖူးသလောက်..မူလတန်းမှာ..အိမ်ကမောင်းလို့ လွှတ် တော်တဲ့လူတွေက..များသောအားဖြင့်.. အတန်းကြီးရင်.. အီသွားရော။ သူ့စိတ်ကူးလေး နဲ့သူသာ..လွှတ်ထား။ သားလေးက..ချစ်စရာလေး။
tdrfav;udk vmvnfjzpfayr,f. bmrSra&;jzpfcJhbl;
om;om;u i,fi,fuwnf;u 'DavmufOmPfaumif;wmudk tpfru pdwfylaeao;w,f
usaemfh orD;qdk ckxd wpfuae wpfq,f t*Fvdyfvdk ra&;wwfao;bl;
အို… သားပိရိသတ် ကလည်း မနည်းပါလား။
အမတန်ခူးရဲ့ ချစ်လှစွာသော သားတော်မောင် ဖိုးရွှေလိပ်ကလေးကို ခုမှသေချာလာကြည့်ရတော့တယ်
ခလေးလေးက ချစ်စရာကောင်းသလို အမတန်ခူးက ခလေးကို ချစ်စဖွယ်အပြောလေးတွေ သင်ပေးနေတာကိုး
မုန့်ဆီကြော်ဘယ်ဆီမှန်းမသိပေမယ့် အမတန်ခူးလို သင်ပေးချင်နေပြီ
ချစ်စရာသားသားလေးကို လာကြည့်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ်တယောက်ရော အစီအစဉ် ရှိသေးလားဟင်။
ဒီနေ့ပိတ်ရက်မှာတခုခု ရေးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
သားလေး ပုံစံကြည့်ရတာ ၀၀ကစ်ကစ်လေးထင်တယ်။ ပုံကို အာရုံစိုက် အလှခြယ်ဆွဲနေတာလေးက ချစ်စရာလေး။
မမ သားလေးက ကစ်ကစ်ကလေး ချစ်စရာလေးနော် သားအကြောင်းမောင်မျိုးဆီက လင့်ကနေ အမြဲလာဖတ်ဖြစ်တယ် အခုတော့ သားပုံကိုတွေ့လို့ မနေနိုင်လို့ကွန်းမန့်ပွတ်လိုက်ပြီ သားကမျောက်ရှုံးအောင် ဆော့ပုံမရဘူးနော် လိမ္မာတယ်နော် မွန်ကလဲ တယောက်ထဲသမီးဆိုတော့ တဦးတည်းသောကလေးတွေတွေ့ရင် ချစ်လဲချစ် သနားလဲသနားတာ မမပို့စ်တွေဖတ်တိုင်း သားကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေ ဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတာ လင်းလို့ ဝင်းလို့
ခေါင်းငုံနေတဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်ရတာတောင်.. ဖေဖေ၊ မေမေတို့ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူလေးလို့ ခံစားရတယ်။ ဖေဖေ၊ မေမေတို့ထက် သာလွန် မြင့်မြတ်နိုင်ပါစေ။
မောင်မျိုးရေ… သားအကြောင်းက ရေးချင်ရက်လက်တို့ မို့ … အဲလို အားပေးမယ့်သူတွေ ရှိနေရင် ရေးနေဦးမှာပါ… ကျေးဇူးပါ….
အိမ့်ရေ… ကျေးဇူးပါနော်… ပထမဆုံးများကို ရေးပေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
သက်ဝေရေ… ဟုတ်တယ်နော်… ဆိုက်ကိုဖြစ်သွားရင် အခက်…
ကျေးဇူးပါ မုဒိတာရယ်… နာမည်လေးက ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ… ခုလို လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ပါဦးနော်…
ချိုသင်းရေ… ပန်းချီဝါသနာပါတာ ဘယ်သူနဲ့ သွားတူမှန်းကို မသိတာ… တို့ ၂ယောက်လုံးက ပန်းချီမတော်ဘူးလေ… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သားကို အနုပညာတခုခု ၀ါသနာ ပါစေချင်တာ အတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့… အိမ်ခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်နေတာ…
Htayရေ… ဟုတ်တယ်နော်… သူတို့ ခြေလှမ်းတွေ စောင့်ကြည့်ရတာကိုက ခံစားမှုမျိုးစုံပဲ… ကြည်နူးလိုက်… စိုးရိမ်လိုက်နဲ့ … ခုလို ကော်မန့် လေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
လင်းရေ…တတ်နိုင်ရင်တော့ ကိုအန်ဒီတို့ဘလော့ဂ်လေးလို နေရာတိုင်းမှာ သားလေးပုံတွေနဲ့ခြယ်မှုန်းချင်တာပါ… ဒါပေမယ့် သားလေးပုံတွေ့ ရင် သားအမေ ဘယ်သူလဲ သိသွားရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဘလော့ဂ်ရမှာ စိုးလို့ ပါ…
ကိုအန်ဒီရေ… ဒီမိသားစုက အကြောင်းလေးတွေ ဟိုမိသားစုသိသွားတော့ နွေးနွေးထွေးထွေး…
ရွာသားလေးရေ… အိမ်ပြန်တဲ့ ရာသီရောက်တော့မှာမို့အမေ့အတွက် အလွမ်းတွေ ပြေတော့မှာပေါ့…
ဟုတ်တယ်ကိုပေါရေ… ကျွန်မက သူများတွေ ပန်းချီဆွဲတော်တာ အားကျပေမယ့် ကိုယ်တိုင် မဆွဲတတ်လို့သားလေးကျတော့ ဆွဲတတ်လေမလား မျှော်လင့်ချင်တွေနဲ့ ….
ကိုဇနိရေ… ဒါဆိုလဲ မြန်မြန်လေး အဖော်ရအောင် ရက်ရွေးလိုက်တော့နော်… ဒီကလဲ ဂျူနီယာကိုဇနိ၊မဇနိလေးတွေ မြင်ချင်လှပြီ….
နုရေ… အတုယူပြီးမြန်မြန်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်တော့လေ…
ပေါက်မှာ ကလေးလေးရှိလား… တို့ လဲ တခါတလေ စိတ်မရှည်ပါဘူးပေါက်ရယ်… ဒီလိုပဲ ချော့တခါ ခြောက်တလှည့်ပေါ့….
ကိုသစ်နက်ဆူးဆွဲတဲ့ ပုံလေးတွေ အားကျပြီး သားလေးရဲ့ ၀ါသနာအခံအရ အဲလို ထူးချွန်တဲ့ ပန်းချီဆရာလေး တယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်… အိမ်ချင်းနီးရင်တော့ သားကို သင်တန်းတက်ခိုင်းတယ်…
ပုံရိပ်ရေ… ပုံရိပ်ပြောသလိုလေး ဖြစ်ပါစေလို့ … သားလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းက တို့ အတွက် ကဗျာတပုဒ်ပေါ့ ညီမရယ်…
မြတ်နိုးရေ… ဒီကို လာလည်လေ… ဒါဆို ဖက်နမ်းလို့ ရတာပေါ့… တော်ကြာ ဆော့လွန်းလို့အန်တီမြတ်နိုး မောသွားလိမ့်မယ်…
ကောင်းကင်ကိုရေ… ကျေးဇူးပါ… ဒါတောင် မျက်နှာကို မတွေ့ သေးလို့ … ဟိဟိ…
ကေရေ… ဒါဆို ကေ့လို စာရေးကောင်းတဲ့ ပုံဆွဲလဲတော်တဲ့ အနုပညာသမားလေးများ ဖြစ်လာမလား မသိဘူးနော်… အဲလိုဆို ပျော်စရာ….
မေမိုးရေ… တကယ်တော့ သူတို့ အရွယ်တွေက စာရေးဖို့ငယ်ပါသေးတယ် ညီမရယ်… တို့ တွေ ငယ်ငယ်တုန်းက အဲလောက်အရွယ်ဆို စာရေးမသင်သေးဘူးလေ… အမကတော့ သူideaလေးရသွားရင်ကျေနပ်ပြီ… တခါတလေ သူဆွဲတာတွေ မှားတာ မပြင်ဖြစ်ဘူး… ရောက်ဖြစ်တာ သိရလို့ ကျေးဇူးပါညီမရေ… နောင်လဲ လာလည်နော်… ညီမနာမည်တော့ အမြဲသတိရနေမှာ…. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တို့ ညီမတယောက်နဲ့ နာမည်တူလို့ ..
မမရေ… သားပရိသတ်တွေကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မလဲ ကြည်နူးနေတာ…
မဇနိက ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိလေးဆိုတော့ တို့ ထက်တောင် သင်တတ်ဦးမှာ… နူးညံ့ယဉ်ကျေးမယ့် အညာသွေးစစ်စစ် တို့ တူ(သို့ ) တူမလေးကို အမြန်တွေ့ ရအောင် ဒီသီတင်းကျွတ်…
ပန်ရေ… အသက်ကလဲကြီး…stressကလဲကြီးဆိုတော့ ဒီတယောက်ပဲ စုပုံချစ်တော့ မလို့ … ပန်ရော… ဘယ်တော့….
ကိုစေးထူးရေ… သားက ကိုယ်လုံးကသိပ်မ၀ပေမယ့် မျက်နှာလေးကတော့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးတွေနဲ့ဝတယ်ထင်ရတယ်…
ညီမမွန်ရေ… သားလေးက မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့ပါတယ်ညီမရယ်… ခုနောက်ပိုင်း နားလည်လာလို့ထိန်းရလွယ်သွားတာ… လာလည်တာကျေးဇူးပါနော်… နောက်လဲ လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ မ ရေ…
အားပေးသွားတယ်။ ပေါင်ချိန်စက်ကို ဘယ်နှစ်နာရီလည်းမေးတာ အရမ်းသဘောကျသွားတယ်။
သားသား....အာဘွား ဘာတွေရုတ်နေတုန်းဂျး) အစ်မရေ့ အားရင်အမှတ်တ၇လေး အားပေးပါအုံးးး